Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Oo Kulan la Qaatay Boqor Salmaan Bin Abdulaziz Al Saud. – Heemaal News Network
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa maanta qasriga boqortooyada kula kulmay boqorka dalka Sucuudiga, Boqor Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Khayre ayaa sidoo kale kulamo la qaadanaya madaxda Bangiga horumarinta Islaamka oo ay ka wada hadlayaan horumarka dhaqaalaha Soomaaliya, maal-gelinta iyo dib-u-habaynta ballaaran ee lagu sameeyay hannaanka maamulka maaliyadda dalka.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo ay waheliyaan wasiirro ka tirsan xukuumadda ayaa booqasho rasmi ah ku jooga dalka Sacuudiga.
Gaadhi Waxyaalaha Qarxa Lagu soo Xirey Oo ku Qarxay Muqdisho.(Sawiro)
Rosenberg: “Maxamed Bin Salmaan Waxa Uu ii Ballan-qaaday in Kaniisado Badan Aan ka Dhisno Sacuudiga..”
Madaxa madhabta Evangelical-ka ee Kirishtan ee dalka Mareykanka Joel Rosenberg, ayaa shaaciyey in dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan uu u ballan-qaaday in kaniisado laga dhiso dhulka labada masjid ee barakeysan, balse uu waqti siiyo. Rosenberg […]
Bin Salman Oo Kuwait U Tagay Sidii Loo Heshiisiin Lahaa Dalka Qatar Xidhiidhkoogana Loo Soo Celin Lahaa
Boqor sugaha dalka sacuudi carabiya Mohammed bin Salman ayaa booqasho ku tagi doona labada maalin ee inagu soo aadan wadanka ay dariska yihiin ee Kuwait si loo xaliyo qilaafka ka dhaxeeya dalka qatar, dibna loo […]